Bangiyada Sawirka: Goobaha ugu Fiican ee Bilaashka iyo Bilaashka ah ee 2019 | Laga soo bilaabo Linux
Bangiyada muuqaalka tooska ah ayaa si fudud u ah bakhaar, buugaagta buugaagta lagu kaydiyo, meel lagu kaydiyo uruurinta sawirro, xardho, sawirro, taas oo ah, sawirrada, guud ahaan. Kuwani badanaa waxay u adeegaan fayl tixraac ah ama barta laga bilaabayo waxqabadyo badan, illaa hadda iyo mabda 'ahaan, waxay bixiyaan suurtagalnimada daabacaadda, la-tashiga iyo soo dejinta, si xor ah ama lacag ah, malaayiin sawirro ah dhammaan isticmaaleyaasha aduunka.
Adeegsigooda ama ujeeddadooda ugu weyni waa in loo isticmaali karo inay yihiin bixiyeyaal sawirro tixraac ah oo loogu talagalay diyaarinta tifaftirka iyo nuxurka xogta badan., khadka tooska ah iyo haddii kaleba, ha ahaato warbaahinta dhijitaalka ah sida bogagga internetka iyo baloogyada, iyo sidoo kale warbaahinta daabacan sida joornaalada, wargeysyada, iyo warbaahinta kale ama qaabab kale.
Inta badan bangiyada muuqaalka ee maanta ayaa iibsada ama iibsada oo martigeliya si xor ah ama shuruudo leh, sawirada milkiilayaasha ama abuuraha (sawir qaade, farshaxan, koox). Iyo markeeda, hawshan, waxay helayaan dhammaan ama qayb ka mid ah xuquuqda taranka iyo isticmaalka sawirka gaarka ah. Si aad hadhow ugu hesho iyaga oo xor ah, oo leh xaddidaadyo ama lacag bixin, martidaada, isticmaaleyaashaada ama xubnahaaga.
1 Bangiyada Sawirka ee ugu fiican 2019
1.1 Bangiyada ugu fiican ee bilaashka ah iyo kuwa bilaashka ah
1.3 Raadinta CC
1.5 Sawirada Meelaha Dadweynaha
1.7 Sawirada Hantida Bilaashka ah
1.8 Sawirro bilaash ah
1.12 Bangiyada kale ee waxtar leh oo caan ah
1.13 Raadinta Sawirka
Bangiyada Sawirka ee ugu fiican 2019
Bangiyada ugu fiican ee bilaashka ah iyo kuwa bilaashka ah
Maanta, waxaa jira bangiyada sawirka badan oo khadka tooska ahQaarkood suuqa ayey ku jireen muddo dheer, kuwa kalena waa dhowaan. Qaarkood waxay ka yimaadeen kaliya hal nooc oo sawiro ah, kuwa kalena waxay leeyihiin qaybo yar ama inbadan oo la heli karo. Kuwa kale waa sawirro bilaash ah oo bilaash ah, kuwa kalena waxay bixiyaan oo keliya sawirro lacag bixin ah, kuwa kalena waxay leeyihiin labadaba qaabab.
Halkan waxaa ah liis fiican oo ah bangiyada muuqaalka bilaashka ah iyo kuwa bilaashka ah:
qarxaan Waa degel ku qoran Ingiriis iyo Boortaqiis. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Keen dhowr kooxood oo sawirro ah ama kala soocid ah "Qaybaha Caan ka ah" iyo "Ururinta". Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo loogu talagalay dadweynaha oo bilaash ah. Waa degel ay abuureen 2 sawir qaade oo reer Canada ah, oo bixinaya goob ay ka buuxaan sawirro tayo sare leh oo ka kala socda sawir qaadayaasha kala duwan ee adduunka.
Raadinta CC Waa degel ku qoran luuqadda Ingiriiska oo keliya. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Keeni mayso kooxo sawirro ama kala soocid laakiin waxay leedahay miiraa raadin oo ay kujiraan "nooca liisanka", "bogga laga helo" iyo "abuuraha". Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo caam ah oo bilaash ah. Waa degel ay abuureen ururka Creative Commons ee fadhigiisu yahay USA. Waxay kaloo leedahay firfircoon interface jir wali.
Foter Waa degel ku qoran luuqadda Ingiriiska oo keliya. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Waxay u keeneysaa kooxo yar oo sawirro ah ama kala soocid ah «Qaybaha». Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo loogu talagalay dadweynaha oo bilaash ah. Waa goob fadhigeedu yahay Maraykanka, oo bixisa goob ay ka buuxaan sawirro tayo wanaagsan leh oo ku jira 3 qaraarro kala duwan oo hore loo sii dejiyey.
Sawirada Meelaha Dadweynaha
Sawirada Meelaha Dadweynaha waa degel ku hadla luuqado badan oo ay ku jiraan Isbaanish. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Waxay ku keenaysaa kooxo badan oo sawirro ah ama kala soocid ah «Qaybaha» ama «Qaybaha». Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo caam ah oo bilaash ah. Waa degel ku taal Ingriiska, oo bixisa noocyo badan oo sawiro bilaash ah oo tayo fiican leh iyo qaraarro wanaagsan oo lacag bixin ah.
PngImg Waa degel ku qoran luuqadda Ingiriiska oo keliya. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Keena kooxo badan oo sawirro ah ama kala soocid ah "Qaybaha" iyo "Qaybaha". Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo loogu talagalay dadweynaha oo bilaash ah. Waa degel bixisa sawirro iyo sawirro bilaash ah oo kaladuwan oo tayo wanaagsan leh laakiin kaliya qaab .png ah, gaar ahaan naqshadeynta websaydhka iyo naqshadeynta guud ahaan.
Sawirada Hantida Bilaashka ah
Sawirada Hantida Bilaashka ah Waa degel ku hadla luuqado badan oo aan ku jirin Isbaanish. Kuu oggolaan maayo inaad raadiso sawirrada adoo adeegsanaya qaabab eray bixin ah. Waxay ku keeneysaa tiro wanaagsan oo kooxo ah sawirro ama kala soocid ah «Qaybaha». Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo loogu talagalay dadweynaha oo bilaash ah. Waa goob ku taal Ruushka, oo bixisa noocyo badan oo sawirro bilaash ah oo tayo sare leh iyo xallin aad u fiican.
Sawirro bilaash ah
Sawirro bilaash ah waa degel ku hadla luuqado badan oo ay ku jiraan Isbaanish. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Waxay keentaa tiro wanaagsan oo kooxo ah sawirro ama kala soocid ah "Qaybaha" iyo "Qaybaha". Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, oo sawiradeeda oo dhami waa kuwo loogu talagalay dadweynaha oo bilaash ah. Waa goob fadhigeedu yahay Maraykanka, oo bixisa sawirro bilaash ah oo kala duwan oo tayo sare leh iyo 5 qaraar oo horay loo sii dejiyey.
Freepik Waa degel ku yaal Isbaanishka. Raadi sawirro, vektor, sawirro kayd ah, faylasha PSD iyo Icons adigoo adeegsanaya qaabab erey. Waxay ku keeneysaa tiro wanaagsan oo ah kooxo sawir ama kala soocid ah «Qaybaha» iyo «raadinta caanka ah». Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, sawiradooduna waa bilaash iyo adeeg dadweyne waana la bixiyaa adeeg qaali ah. Waa degmo ku taal Mareykanka, oo bixisa noocyo badan oo tayo wanaagsan leh.
Jaahilnimada Waa degel ku yaal Isbaanishka. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Waxay keeneysaa qaddar yar oo kooxo ah sawirro ama kala soocid ah «Qaybaha». Uma baahna diiwaangelin adeegsiga adeegsiga, sawiradooduna waa bilaash iyo adeeg dadweyne waana la bixiyaa adeeg qaali ah. Waa goob fadhigeedu yahay Maraykanka, taas oo aan hadda bixinaynin noocyo badan oo sawirrada la heli karaa ay ku yimaadaan oo keliya qaraar horay loo sii caddeeyay.
kaboompics Waa degel ku qoran Ingiriis. Raadi sawirro adoo adeegsanaya qaababka ereyga. Waxay ku keeneysaa tiro wanaagsan oo ah koox sawirro ah ama kala soocid ah "Qaybaha" oo waxay ku sifeeyaan "Qeybaha". Uma baahnid diiwaangelin si aad u isticmaashid adeegga, oo sawiradaaduna waa bilaash iyo adeegsi guud. Waa goob fadhigeedu yahay Mareykanka, oo hadda kaliya kuu oggolaaneysa inaad soo dejiso sawirrada laga heli karo 2 qaraar horay loo sii caddeeyay iyo mid la beddeli karo.
Bangiyada kale ee waxtar leh oo caan ah
Halkan waxaa ah liis dheeri ah oo kale oo ah bogagga Bangiga Sawirka ee xiisaha u leh raadinta, booqashada iyo sahaminta:
Sawirro Cunto Bilaash ah
IM lacag la'aan ah
Meelaha aan xuneyn
Waxaa jira goobo aan si sax ah u ahayn Bangiyada Sawirka laakiin ah sahamiyayaal muuqaal oo ku yaal Bangiyada Sawirka. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Bangiyada sawirku shaki la'aan waxay noo fidiyaan faa'iidooyin badan, gaar ahaan kuwa si xirfad leh ugu baahan mashaariicdeena, maqaallada ama waxyaabaha ku jira warbaahinta badan si ay u isticmaalaan sawirro, bilaash iyo bilaash ama maqnaanshaha lacag bixinta.
Maaddaama aan loo eegin waxa aan horumarinayno ama wax ka beddeleyno, baahida maalinlaha ah ee sawirro cusub, waxay ka dhigeysaa bogaggan ilaha ugu habboon ee lagu heli karo waxyaabo la xiriira mawduuceena, iyo faa'iidada dheeriga ah ee qaar badan oo ka mid ah inkasta oo ay xor yihiin oo bilaash yihiin, ay yihiin tayo aad u weyn oo ay sameeyeen xirfadlayaal, taas oo noo oggolaanaysa inaan ka yaabno akhristayaashayada, macaamiisha ama isticmaaleyaasha waxyaabahayaga iyo alaabooyinka lagu sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Bangiyada Sawirka: Goobaha ugu wanaagsan ee bilaashka iyo bilaashka ah ee 2019
Aad ayaad u mahadsantahay aad! Waxaan sidoo kale la shaqeeyaa fiidiyowga waxaanan helay boggan oo aan jeclaa gebi ahaanba bilaash, waxaa loo yaqaan https://Gifing.com, waxay ka kooban tahay waxyaabo kala duwan oo jilaayaal ah iyo qaab toosan oo loogu talagalay shabakadaha bulshada, aad ayaan u isticmaalay, waxaan rajeynayaa inay caawin doonto
Jawaab Alex Polo
Salaan Alex! Waad ku mahadsantahay faalladaada. Ma jiraan bangiyo fiidiyoow badan oo la yaqaan, sidaa darteed wax ku biirinta wanaagsan.